Spotify bụ otu nnukwu ọrụ na-edi ya mmepe ime ka music niile. Nke a n'elu ikpo okwu nyere ọhụrụ ọkwụkwọ ka music gụgharia na a na-emelite kwa oge na-enye ọ bụla na-ese a ohere na-agbasa ọrụ ha na-ege ntị a ùgwù na-enwe ndị kere. Ị ga-eche otú a ngwa-arụ ọrụ na Olee otú ụfọdụ ịtụnanya atụmatụ nke a gụgharia software n'ezie eji. Na-esonụ ederede ga-elekwasị anya na-ekwu banyere ole na ole n'ime atụmatụ na nwetara ezuru ekele.
Part 1.How Spotify na-arụ ọrụ online / offline?
Part 2.How eme Spotify redio ọrụ
Part 3.How Spotify-arụ ọrụ na PS4
Part 4.How Spotify na iji P2P technology
Part 5.How ibudata na-eji Spotify Ripper?
1.How Spotify na-arụ ọrụ online / offline?
Ị nwere ike na-ege ntị ọ bụla track dị na Spotify nchekwa data ezie na dị dị ka na ndenye aha gị na a mfe search nhọrọ. Ozugbo ị nbanye netwọk ị nwere ohere ya nde ụda egwu na videos. The listi ọkpụkpọ na-mara mma curated ona gị ọnọdụ uche na kwa ị pụrụ ime ka gị omenala listi ọkpụkpọ nke gị ọkacha mmasị.
Ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị ịzọpụta egwu na ngwaọrụ gị na-enwe ha na-anọghị n'ịntanetị, ebe a bụ-anọghị n'ịntanetị atụmatụ nke na-abịa kemfe.
Họrọ track ị chọrọ igwu. N'elu-nri ị ga-ahụ 'E Nwere anọghị n'ịntanetị' toggle mgba ọkụ, gbanye ka mmekọrịta na egwu ngwaọrụ gị. Alternatively, ị nwere ike nri pịa egwu ahụ na họrọ E Nwere offline nhọrọ si popup menu.
2.How eme Spotify redio ọrụ
Ọ bụ ihe dị egwu ụzọ na-ege ntị na redio ụgbọ na-ahaziri na-egwu music dị nnọọ n'ụzọ ị chọrọ, oge ị chọrọ na genre ị na-ahọrọ. Spotify akpaghị aka site na random track ndepụta na-etolite a mebere redio izute gị chọrọ. Ị nwere ike họrọ artists-amasị gị, na-egbochi ndị ị na-eme adịghị, n'ihi ya, ugbu a, ị nwere ike a ahaziri ọwa redio maka ọkacha mmasị gị artists. Site na ndabara ị ga-ahụ na redio ụgbọ na-atụ aro dabeere na-ese na i gee ntị ugboro ugboro ma ọ bụ ụdị ị na-ahọrọ. Ị nwere ike ịchọta yiri artists na-atụ aro n'akụkụ na-ewetara gị ihe nhọrọ.
Ike ọhụrụ redio click 'ike ọhụrụ ojii' button n'elu nri nke redio window. Tinye egwu na ịzọpụta ojii
3.How Spotify-arụ ọrụ na PS4
Sony ka ẹkenam a ọhụrụ music ọrụ dị maka PlayStation ọrụ. The tupu ẹdude Music Unlimited site Sony e kwụsịrị, ma ugbu a ị nwere ike ịnweta mmasị music ọrụ, Spotify na ha na ngwaọrụ. Ihe niile ị chọrọ ime bụ Mepee Spotify ngwa na console. A nbanye peeji ga-adị, ndị òtù pụrụ nanị nbanye mgbe ọhụrụ ọrụ ga-ịrịba ama-elu na ọrụ. The Spotify interface ga-ele anya yiri ihe PS interface ma ị gaghị ahụ ukwuu dị iche na abụọ.
Ọrụ nwere ike ịnweta ndepụta ọkpụkpọ na egwu, tinye egwu gị collection na a click ma chọọ gị ọkacha mmasị. E nwere ndakpọ olileanya n'ihi na ọrụ ike na-agagharị site na ha ọkacha mmasị artists ma ọ bụ albums echekwara na collection.
4.How Spotify na iji P2P technology
P2P (ọgbọ na-na-ọgbọ) bụ a na-ekesa ụka n'Ịntanet usoro ebe ọrụ ịkọrọ ego na-etolite a na netwọk na-arụ ọrụ na-enweghị mkpa ka ndị na ohere Central ọnụ. N'ihi ya ọgbọ na-ma suppliers na-eji ọkụ nke ego na netwọk, bandwit, nchekwa na nhazi nkeji.
Spotify ọrụ ga-edebewo na ngakọrịta na buffering oge n'elu Spotify netwọk dị ala ka tụnyere ndị ọzọ ọrụ. Nke a bụ n'ihi na ọ kere a netwọk ebe ọ dịghị mkpa iji nweta Central nchekwa nchekwa data (nchekwa nkesa) na-egwu music kama ọ buffers si obodo na saịtị, mbenata loding oge na ihe onwunwe.
5.How Spotify na iji P2P technology
Ripping na-ezo aka na-edegharị ọdịyo ma ọ bụ video faịlụ site a nchekwa na ngwaọrụ dị ka a na diski ike ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ isi iyi dị ka onye na ngwa ma ọ bụ online nchekwa data.
Mgbe ụfọdụ ị gaara mmasị a song on Spotify unu na-achọkwa na-azọpụta ya na ngwaọrụ gị dị ka ihe mp3 faịlụ na ọ bụghị naanị na Spotify. Ma, ị na-enweghị ike na-eme ya? Enweghị nchekasị n'ihi na ugbu a, i nwere ike ime ihe nile na ị chọrọ na rippers. Ripping ga-ekwe ka ị na-ege ntị nkwanye free, download ngwaọrụ gị, detuo na ịkekọrịta tracks na ndị enyi gị. Ị nwere ike idezi na egwu na uche. Download Ripper software na-emeghe ngwa.
Ozugbo ị na-emeghe ngwa, na-emeghe Spotify ọrụ. Pịa ndekọ bọtịnụ na Ripper na mgbe ahụ ịkpọọ egwu na Spotify. Mgbe music-amalite na Spotify, na Ripper na-akpaghị aka na-amalite ndekọ, na-eji okwu dị ka isi iyi nke music. Zọpụta dere track na ị dị njikere na-aga.
Olee otú Kagbuo Spotify adịchaghị na Kagbuo Spotify Trial
> Resource> Spotify> Olee Spotify-arụ ọrụ?